यी राशिका महिला छिटै सहवासका लागि तयार हुन्छन् ! - Sidha News
यी राशिका महिला छिटै सहवासका लागि तयार हुन्छन् !
सहवासले जुनसुकै प्राणीको जीवनमा पनि महत्व राख्छ । यौ नलेविना सृष्टि असम्भव छ । यद्यपी सन्तान उत्पादनको लागिमात्र नभई मानिसलाई खुसी र सन्तुष्ट राख्नको निम्ती यौ नको आवश्यकता छ । यसको महत्वलाई सकरात्मक तवरले बुझ्ने हो भने यसबाट जीवनलाई सुखद् र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।
तर यसलाई सम्भोग पनि भन्ने गरिन्छ । सम्भोगको अर्थ समान भोग गर्नु बुझिन्छ । अर्थात यौ नसम्बन्धको समयमा दुबैले बराबर सन्तुष्टी पाउन सक्नु । यदि सहवास गर्दा दुई मध्ये एकजना सन्तुष्ट हुन सकेन भने सम्बन्ध दिगो रहन सक्दैन । त्यसैले आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट राख्न उसको मनोविज्ञानलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
महिलाहरूको राशि अनुसार सहवासको चाहनापनि फरक हुन्छ । त्यसैले तपाईंको पार्टनर कुन राशिको हो सोही अनुसारले सहवासगर्न सक्नुहुनेछ ।
मेष राशि: यो राशिका महिलाको मुख र निधार एकदमै संवेदनशील हुन्छ । तपाईंले मुख र निधारमा चुम्बन गर्नु भयो भने उनीहरु चाँडै सहवासको लागि तयार हुन्छन् वा महिलामा चाँडै यौ न उत्तेजना बढ्दछ । मेषराशिका महिलाहरु रातो रङप्रति ज्यादै आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले यदि तपाईंको सहवास पार्टनर मेषराशिकी छिन् भने यौ न क्रियाकलाप गर्नु भन्दा अगाडि रातो रङको कपडा लगाउनु होस् ।
वृष राशि: यो राशिका महिला जति धेरै रोमान्टिक हुन्छन् त्यति नै धेरै समय यौ न क्रियाकलापमा राजी गराउन समय लाग्दछ । त्यसैले तपाईंको सहवास पार्टनर वृषराशिवाला छन् तर तपाईं चाँडै यौ न क्रियाकलाप गर्ने सोच्नु हुन्छ भने तपाईंले दुःख पाउनु भयो अर्थात् तपाईंको यौ नजीवन त्यति सहज हुने छैन जति तपाईं सोच्नु हुन्छ ।वृषराशिका महिलाको गर्धन निक्कै संवेदनशील हुन्छ त्यसैले सहवास गर्नुअघि गर्धनमा चुम्बन वा स्पर्श गर्नु भयो भने निक्कै चाँडै उ त्तेजना पैदा गर्न सक्नु हुन्छ । साथै यो राशिका महिला महङ्गा गहना लगाउन मन पराउने भएकाले सहवासको लागि रिझाउन महङ्गा गहना खरिद गरिदिने पनि गर्न सक्नु हुन्छ तर आफ्नो खल्ती चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला ।
मिथुन राशि: यो राशिका महिला सहवासको लागि सधैँ सक्रिय रहन्छन् । यिनीहरु आकर्षक वस्तुप्रति निक्कै नै ध्यान दिने हुन्छन् । उनीहरुलाई हातमा चुम्बन गर्दा निक्कै आनन्द आउँछ । साथै यो राशिका महिलाहरु यस्तो रोमान्टिक ठाउँमा जान रुचाउँछन् जहाँ उनीहरुका पुराना कुरा याद आउन् ।
कर्कट राशिः यो राशिका महिला निक्कै भावुक र मानसिक रुपमा पनि संवेदनशील हुन्छन् । यसै कारणले पनि सहवासमा खासै रुची राख्दैनन् भने सहवास गर्दा पनि भरपुर आनन्द लिन सक्दैनन् । यो राशिका महिलाहरु चन्चल स्वभावकका हुन्छन् । उनीहरु पार्टनरको भन्दा आफ्नो सन्तुष्टिकोलागि मात्रै क्रियाशिल रहन्छन् । तैपनि उनीहरुलाई ‘क्याण्डल लाइट डिनर’ निक्कै मन पर्ने भएकोले त्यहाँ लैजान सकिन्छ । कर्कटराशिका महिलाको स्त न सबैभन्दा संवेदनशील हुने भएकोले सहवासको सुरुवात यहिबाट गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
सिंह राशि: सिंहराशिका महिलालाई बनावटी कुराहरु वा देखावटी सौन्दर्य र चिजबस्तुहरुप्रति निक्कै आकर्षण हुन्छ । यिनीहरु रोमान्टिक वातावरणमा चाँडै र सजिलै घुलमिल हुनसक्छन् । यो राशिका महिलाहरु आफ्नो पार्टनरलाई आफूमाथि हावी हुन भने दिँदैनन् । यिनीहरुको पिठ्युँ सहवासको लागि निक्कै संवेदनशील हुन्छ ।
कन्या राशिः यो राशिका महिला आफ्नो यौ न इच्छालाई चाँडै बाहिर निकाल्न चाहँदैनन् तर भित्र भने सहवासको भोक निक्कै हुने गर्दछ । यिनीहरुलाई पेटमा किस गर्न निक्कै मन पर्दछ । सहवास सम्पर्क गर्नु भन्दा अघि उनीहरुलाई पेटमा स्पर्श गर्ने वा छुने गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
तुला राशि: यो राशिका महिलाहरु सहवासको लागि निक्कै नै छिटो तयार हुन्छन् । उनीहरुको राशि स्वामी शुक्र भएकोले पनि यस्तो भएको हो। शुक्रलाई यौ नउत्तेजना बृद्धि गर्ने ग्रहको रुपमा लिइन्छ । यो राशिका महिलालाई सहवासको बेला कुराकानी गर्न बिलकुलै मन पर्दैन । यिनीहरुको पिठ्युँको तल्लो भाग निक्कै संवेदनशील हुने भएकोले त्यहाँ स्पर्श गरेर सहवासप्रति उत्तेजना जगाउन सकिन्छ ।
वृश्चिक राशि: यो राशिका महिला सहवासको लागि निक्कै नै संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरुलाई बडी मसाज मन पर्ने भएकोले मसाजबाटै चाँडै उत्तेजना पैदा गराउन सकिन्छ ।
धनु राशि: धनुराशिका महिलाहरु धार्मिक प्रकृतिका हुन्छन् । यिनीहरुलाई रोमान्सको लागि एकान्त ठाउँ मन पर्छ । यो राशिका महिलालाई रोमान्टिक गीत, सहवास फिल्म वा सहवाससम्बन्धी कुराकानीबाट चाँडै प्रभावित गर्न सकिन्छ । यिनीहरुको जाँघ सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ ।
मकर राशि: यो राशिका महिलाको खुट्टा निक्कै संवेदनशील हुन्छ । खुट्टाको कुनै पनि भागमा किस गरेर वा स्पर्श गरेर उनीहरुलाई उत्तेजना बढाउन सकिन्छ । यिनीहरुलाई सहवासको दौरान कुराकानी गर्न बिलकुलै मन पर्दैन । यिनीहरुलाई रिझाउन घुमफिर गर्ने वा रोमान्टिक कुराकानी गर्न सकिन्छ ।
कुम्भ राशि: यो राशिका महिलाको काँध तथा कुहिनो ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले यो भागमा अलिकति पनि स्पर्श हुँदा उनीहरु चाँडै उत्तेजित बन्दछन् । यिनीहरुलाई रातीको समयमा नुहाइ धुवाई गरेर सहवास गर्न निक्कै मन पर्छ । यिनीहरुलाई फरफ्युम पनि निक्कै मन पर्दछ।
मीन राशि: यो राशिका महिलालाई आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न ज्यादै मनपर्छ । यिनीहरुलाई थोरै जबरजस्ती वा थोरै चलेको पनि मन पर्छ । यिनीहरुको कुर्कुच्चा निक्कै संवेदनशील हुने भएकोले यहाँ मसाज गरेर पनि उत्तेजना बढाउन सकिन्छ ।